ထိုင်းရေတပ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘော HTMS Chakri Naruebet
News / Article / Militarily
လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်း ခေတ်သစ် ရေတပ်အင်အားစုတွေအတွက် အသည်းနှလုံးတခုပါပဲ၊ ကမ္ဘာမှာ အမေရိကန်စတိုင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေနဲ့ အများဆုံးအကျွမ်းတဝင်ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်း ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ မစ်ရှင်အမျိုးမျိုးကို လေယာဉ်တင်သင်္ဘော မျိုးစုံနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြပါပြီ၊ဒီကနေ့မှာတော့ အသေးဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ Chakri Naruebet အကြောင်း ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊
Chakri Naruebet ကို 1994 July 12ရက်နေ့တွင် ထိုင်းရေတပ်က အသုံးပြုခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ခွဲအကြာ 1996ခုနှစ်တွင် ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်၊ စပိန်ကုမ္ပဏီ Bazan ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောဟာဆိုရင် စပိန် ရဟတ်ယာဉ်တင်သင်္ဘောPríncipe de Asturias ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်
Chakri Naruebet ပေ600 (182.6 မီတာ) ရှည်လျားပြီး ဝင်ရိုးကတော့ 72ပေ (21.9 မီတာ)ရှိတဲ့အပြင် တန်ချိန် 11,485 တန် တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်၊ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အမေရိကန် Nimitzအမျိုးအစားသင်္ဘောကတော့ ပေ1092 (332.8မီတာ)ရှည်လျား၍ 253ပေ (76.8မီတာ) ရှိကာ 104,600တန် တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်၊
Chakri Naruebetတွင် အမှုထမ်း455ယောက်နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း 146ယောက်သာရှိသော်လည်း Nimitz အမျိုးအစားမှာတော့ ‌အမှုထမ်း အယောက်3,300နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း အယောက်3000ရှိပါတယ်၊ Nimitz အမျိုးအစားဟာဆိုရင် နယူကလီးယားစွမ်းအင်အသုံးပြုပြီး မြင်းကောင်ရေအား 260,000 ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်းChakri Naruebet ကတော့ ဂတ် တာဘိုင်အင်ဂျင်နဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်နှစ်မျိုးကိုတပ်ဆင်ထားကာ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေအား 50,687 သာထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်၊
Chakri Naruebet ရဲ့ ဂတ်စ်တာဘိုင်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဟာ 12 knots လျှင် ရေကြောင်းအရ မိုင်ပေါင်း10000 အထိသာရောက်ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအရှိန် 26 knots ရှိကာ ပုံမှန်အမြန်နှုန်း 16knots ရှိပါတယ်၊ အမေရိကန် Nimitzအမျိုးအစားကတော့ ပုံမှန်အမြန်နှုန်း30knotsရှိပြီး အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်းနဲ့ အကွာအဝေးဟာ အကန့်အသတ်မရှိသလို နှစ်20-25နှစ်မှသာ တကြိမ် လောင်စားဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊
ပေါ့ပါးသောလေယာဉ်တင်သည့်သင်္ဘော သို့မဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်သည့် Chakri Naruebet ဟာဆိုရင် အများဆုံး Harrierဂျက်လေယာဉ် 6စင်းနဲ့ ထောက်ပံ့လေယာဉ် 6စင်းတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ၊ Harrier ဂျက်လေယာဉ်ပျံသန်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် 12ဒီဂရီ လျှောစောက်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းဟာဆိုရင် Chinese Type 001 လျှောစောက်ကဲ့သို့ သိသာတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံရှိပါတယ်၊ သင်္ဘောဟာ လေယာဉ်ပင့်တင်စနစ် မပါတာကြောင့် သို့မဟုတ် အားနည်းသော အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းကြောင့် ထိုကဲ့သို့‌ လျှောစောက်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်၊
လျှောစောက်တွေဟာ ပြေးလမ်းတိုအတွင်း ပျံသန်းနိုင်စေရန်ကူညီပေးပေမယ့် လေယာဉ်ရဲ့ အကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်၊ အလေးချိန်ကိုလည်းထည့်စဉ်းရမှာဖြစ်ပြီး လောင်စာပမာဏနဲ့ တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ လက်နက်ပမဏကို လည်း ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်၊
ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအားသုံး ထောက်ပင့်စနစ်ဟာဆိုရင် လေယာဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ပျံတတ်နိုင်ရန်လည်း အကူအညီပေးပါတယ်
Chakri Naruebet ရဲ့ ကာကွယ်ရေးလက်နက်တပ်ဆင်မှုဟာဆိုရင် Mistral လောင်ချာ သုံးခုသာ တပ်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ Mistral ဆိုတာ တာတို ပင်လယ်သုံး လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်ဖြစ်ပြီး ထိပ်ဖူးတွင် 6.6ပေါင်လေးသည့် အဖြိုက်နက် အားတပ်ဆင်ထားပါတယ်၊ Mistral ကို ပစ်မှတ်ရဲ့ အရှေ့သို့မဟုတ် အနောက် မှာပေါက်ကွဲစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး ဗုံးလက်ကျန်အစအနအဖြစ် ‌ဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်၊ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ၎င်းရဲ့ 2.6မိုင် (4Km )အကွာအဝေးကြောင့် ခေတ်သစ် လေကြောင်းအန္တရာယ်နဲ့ အသံထက်မြန်တဲ့ ဒုံးကျည်ရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး၊
Mistralဟာ အနီအောက် ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပေမ့၊ ရေကြောင်း ရေဒါ စနစ်ဖြင့် ပစ်မှတ်နေရာ‌သို့ လမ်းညွှန်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး၊သူ့မှာ ပစ်မှတ်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက် အနီအောက် ရောင်ခြည်စနစ်သာ ပါဝင်တာကြောင့် ရန်သူက တန်ပြန်စီမံရေးတွေတောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်၊
အမေရိကန် Rolling Airframe ဒုံးကျည်ကတော့ အီလတ်ထရောနစ်ပဲ့ထိန်းစနစ် ပါဝင်ကာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော သင်္ဘော သို့မဟုတ်လေယာဉ်တွေနဲ့ ရေဒါစနစ် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်၊ အပူချိန်နဲ့ ရောင်ခြည်ကိုလိုက်၍ ရှာဖွေရာတွင် ၎င်းသည် ရန့်ပစ်မှတ်ရဲ့ အပူချိန်အချက်ပြမှုကြောင့်ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခက်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်၊
RAM အမျိုးအစားရဲ့ အများဆုံးအကွာအဝေးကတော့ အနည်းဆုံး 5.6 မိုင်(9ကီလိုမီတာ)ရှိကာ Mistralဒုံးကျည်အကွာအဝေးရဲ့ နှစ်ဆ ဖြစ်ပါတယ်၊ Chakri Naruebet မှာ eight-cell Evolved Sea Sparrow ဒုံးကျည် တပ်ဆင်ရန် ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး လက်တလောမှာတော့ ဘာကိုမှ အစီအစဉ်မချသေးပါဘူး၊
Sparrows ဟာ အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ပုံစံရှိပြီး ထုံးစံအားဖြင့် လောင်ချာ 3ခုမှ4ခု တင်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်၊ အကွာအဝေး 31မိုင် (51km)နဲ့ အမြန်နှုန်း Mach4ရှိတဲ့ Evolved Sea Sparrow မှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တာလတ်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည် ဖြစ်ပါတယ်၊ ၎င်းဟာလည်းRolling Airframe ဒုံးကျည်ကဲ့သို့ ရောင်ခြည်ဖြင့်ရှာဖွေရေးစနစ်ကို အသုံးပြုကာ ပစ်မှတ်ကိုလမ်းညွှန်ပြပေးတဲ့ အလင်းရောင်ရေဒါနဲ့ ထပ်တူညီပါတယ်၊
ထိုင်းရေတပ်ဟာ Sea Sparrowကို တည်ဆောက်ရန် နှောင့်နှေးနေတာနှင့်အမျှ Chakri Naruebet ဟာလည်း ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ပြီး ရှင်သန်ဖို့ မျှော်လင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ထိုင်းရေတပ်ရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ Chakri Naruebet ရဲ့ အဓိက ကဏ္ဍဟာဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးဇုန်အား စောင့်ကြည့်ရှာဖွေရန်၊ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ကူညီရန် ၊ လေကြောင်းအထောက်အပံ့အား ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုကဲ့သို့ လက်နက် ကန့်သတ်မှုများနဲ့ Chakri Naruebet ဟာ ဟောင်းနွမ်းလာတဲ့ Harriersဂျက်လေယာဉ်ကြောင့် အခြားသောလေယာဉ်များ သို့မဟုတ် ရန်သူလေယာဉ်မှ ကာကွယ်ရေးအတွက် အသစ်တွေရွေးချယ်နိုင်စေဖို့အကျိုးအမြတ်ရစေပါတယ်၊
Harriers တမျိုးထဲသာရှိတဲ့ ပင်လယ်အော်တွင် တခြား ရန်သူ့သင်္ဘောများလေယာဉ်များ ထိန်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်လစ်ဟင်းနေတဲ့ Chakri Naruebet ဟာ အန္တာရယ်ကိုထိုင်စောင့်နေတဲ့ ဘဲတကောင်နဲ့တူပါတယ်၊ Chakri Naruebet ကိုပင်လယ်ထဲစေလွှတ်ခဲပီး ပို့တဲ့အခါမှလဲာ ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုကို ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ရှိပြီး ကမ္ဘာအနှံ့က ကာကွယ်ရေး လေ့လာသူတွေဟာ တည်ဆောက်သမျှထဲမှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ တော်၀င်ရွက်လှေလို့ သက်မှတ်ပါတယ်၊
ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းရေတပ်က တဂယ်ပဲ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုလိုအပ်တာလား?ဒါမှမဟုတ် Chakri Naruebet ဟာ တော်ဝင်မိသားစုအတွက်သာ ရည်ရွယ်တည်ဆောက်တဲ့ အထင်ကရ သင်္ဘော တစ်စင်းဖြစ်နေတာလား?
ထိုင္းေရတပ္ရဲ့ ကမၻာ့အေသးဆုံးေလယာဥ္တင္သေဘၤာ HTMS Chakri Naruebet
ေလယာဥ္တင္သေဘၤာဟာဆိုရင္ ထုံးစံအတိုင္း ေခတ္သစ္ ေရတပ္အင္အားစုေတြအတြက္ အသည္းႏွလုံးတခုပါပဲ၊ ကမၻာမွာ အေမရိကန္စတိုင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေတြနဲ႔ အမ်ားဆုံးအကၽြမ္းတဝင္ရွိေပမယ့္ တကယ္တမ္း ကမၻာတဝွမ္းမွာ မစ္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ မ်ိဳးစုံနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၾကပါၿပီ၊ဒီကေန႔မွာေတာ့ အေသးဆုံးေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္တဲ့ Chakri Naruebet အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္၊
Chakri Naruebet ကို 1994 July 12ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းေရတပ္က အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာ 1996ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္၊ စပိန္ကုမၸဏီ Bazan ကတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သေဘၤာဟာဆိုရင္ စပိန္ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာPríncipe de Asturias ရဲ့ ဒီဇိုင္းကို အသုံးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္
Chakri Naruebet ေပ600 (182.6 မီတာ) ရွည္လ်ားၿပီး ဝင္ရိုးကေတာ့ 72ေပ (21.9 မီတာ)ရွိတဲ့အျပင္ တန္ခ်ိန္ 11,485 တန္ တင္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္၊ကမၻာ့ပထမဆုံး အေမရိကန္ Nimitzအမ်ိဳးအစားသေဘၤာကေတာ့ ေပ1092 (332.8မီတာ)ရွည္လ်ား၍ 253ေပ (76.8မီတာ) ရွိကာ 104,600တန္ တင္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္၊
Chakri Naruebetတြင္ အမႈထမ္း455ေယာက္နဲ႔ ေလယာဥ္အမႈထမ္း 146ေယာက္သာရွိေသာ္လည္း Nimitz အမ်ိဳးအစားမွာေတာ့ ‌အမႈထမ္း အေယာက္3,300နဲ႔ ေလယာဥ္အမႈထမ္း အေယာက္3000ရွိပါတယ္၊ Nimitz အမ်ိဳးအစားဟာဆိုရင္ နယူကလီးယားစြမ္းအင္အသုံးျပဳၿပီး ျမင္းေကာင္ေရအား 260,000 ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ္လည္းChakri Naruebet ကေတာ့ ဂတ္ တာဘိုင္အင္ဂ်င္နဲ႔ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ႏွစ္မ်ိဳးကိုတပ္ဆင္ထားကာ စုစုေပါင္း ျမင္းေကာင္ေရအား 50,687 သာထုတ္လုပ္နိုင္ပါတယ္၊
Chakri Naruebet ရဲ့ ဂတ္စ္တာဘိုင္နဲ႔ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ဟာ 12 knots လၽွင္ ေရေၾကာင္းအရ မိုင္ေပါင္း10000 အထိသာေရာက္ရွိၿပီး အျမင့္ဆုံးအရွိန္ 26 knots ရွိကာ ပုံမွန္အျမန္ႏႈန္း 16knots ရွိပါတယ္၊ အေမရိကန္ Nimitzအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ပုံမွန္အျမန္ႏႈန္း30knotsရွိၿပီး အျမင့္ဆုံး အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ အကြာအေဝးဟာ အကန႔္အသတ္မရွိသလို ႏွစ္20-25ႏွစ္မွသာ တႀကိမ္ ေလာင္စားျဖည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊
ေပါ့ပါးေသာေလယာဥ္တင္သည့္သေဘၤာ သို႔မဟုတ္ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္သည့္ Chakri Naruebet ဟာဆိုရင္ အမ်ားဆုံး Harrierဂ်က္ေလယာဥ္ 6စင္းနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေလယာဥ္ 6စင္းတင္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္ ၊ Harrier ဂ်က္ေလယာဥ္ပ်ံသန္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ 12ဒီဂရီ ေလၽွာေစာက္ကို ဒီဇိုင္းဆြဲတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ဟာဆိုရင္ Chinese Type 001 ေလၽွာေစာက္ကဲ့သို႔ သိသာတဲ့ ဒီဇိုင္းပုံစံရွိပါတယ္၊ သေဘၤာဟာ ေလယာဥ္ပင့္တင္စနစ္ မပါတာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အားနည္းေသာ အင္ဂ်င္ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔‌ ေလၽွာေစာက္ဒီဇိုင္းကိုအသုံးျပဳရတာျဖစ္ပါတယ္၊
ေလၽွာေစာက္ေတြဟာ ေျပးလမ္းတိုအတြင္း ပ်ံသန္းနိုင္ေစရန္ကူညီေပးေပမယ့္ ေလယာဥ္ရဲ့ အကြာအေဝးကို ကန႔္သတ္ထားပါတယ္၊ အေလးခ်ိန္ကိုလည္းထည့္စဥ္းရမွာျဖစ္ၿပီး ေလာင္စာပမာဏနဲ႔ တပ္ဆင္နိုင္တဲ့ လက္နက္ပမဏကို လည္း ကန႔္သတ္ထားတာေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာေကာင္းပါတယ္၊
ေရေႏြးေငြ႕ သို႔မဟုတ္ လၽွပ္စစ္သံလိုက္စြမ္းအားသုံး ေထာက္ပင့္စနစ္ဟာဆိုရင္ ေလယာဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးၿပီး ပ်ံတတ္နိုင္ရန္လည္း အကူအညီေပးပါတယ္
Chakri Naruebet ရဲ့ ကာကြယ္ေရးလက္နက္တပ္ဆင္မႈဟာဆိုရင္ Mistral ေလာင္ခ်ာ သုံးခုသာ တပ္ဆင္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ Mistral ဆိုတာ တာတို ပင္လယ္သုံး ေလယာဥ္ပစ္ဒုံးက်ည္ျဖစ္ၿပီး ထိပ္ဖူးတြင္ 6.6ေပါင္ေလးသည့္ အၿဖိဳက္နက္ အားတပ္ဆင္ထားပါတယ္၊ Mistral ကို ပစ္မွတ္ရဲ့ အေရွ႕သို႔မဟုတ္ အေနာက္ မွာေပါက္ကြဲေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဒီဇိုင္းဆြဲထားၿပီး ဗုံးလက္က်န္အစအနအျဖစ္ ‌ဖ်က္ဆီးပစ္ပါတယ္၊ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ ၎ရဲ့ 2.6မိုင္ (4Km )အကြာအေဝးေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ ေလေၾကာင္းအႏၲရာယ္နဲ႔ အသံထက္ျမန္တဲ့ ဒုံးက်ည္ရန္မွ ကာကြယ္နိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး၊
Mistralဟာ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တဲ့စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ေပမ့၊ ေရေၾကာင္း ေရဒါ စနစ္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ေနရာ‌သို႔ လမ္းညႊန္နိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး၊သူ႔မွာ ပစ္မွတ္ကိုရွာေဖြဖို႔အတြက္ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္စနစ္သာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ရန္သူက တန္ျပန္စီမံေရးေတြေတာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္၊
အေမရိကန္ Rolling Airframe ဒုံးက်ည္ကေတာ့ အီလတ္ထေရာနစ္ပဲ့ထိန္းစနစ္ ပါဝင္ကာ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ သေဘၤာ သို႔မဟုတ္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ေရဒါစနစ္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါတယ္၊ အပူခ်ိန္နဲ႔ ေရာင္ျခည္ကိုလိုက္၍ ရွာေဖြရာတြင္ ၎သည္ ရန္႔ပစ္မွတ္ရဲ့ အပူခ်ိန္အခ်က္ျပမႈေၾကာင့္ဒုံးက်ည္နဲ႔ ပစ္ခက္ဖ်က္ဆီးနိုင္ပါတယ္၊
RAM အမ်ိဳးအစားရဲ့ အမ်ားဆုံးအကြာအေဝးကေတာ့ အနည္းဆုံး 5.6 မိုင္(9ကီလိုမီတာ)ရွိကာ Mistralဒုံးက်ည္အကြာအေဝးရဲ့ ႏွစ္ဆ ျဖစ္ပါတယ္၊ Chakri Naruebet မွာ eight-cell Evolved Sea Sparrow ဒုံးက်ည္ တပ္ဆင္ရန္ ကန႔္သတ္ခ်က္ရွိၿပီး လက္တေလာမွာေတာ့ ဘာကိုမွ အစီအစဥ္မခ်ေသးပါဘူး၊
Sparrows ဟာ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ပုံစံရွိၿပီး ထုံးစံအားျဖင့္ ေလာင္ခ်ာ 3ခုမွ4ခု တင္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္၊ အကြာအေဝး 31မိုင္ (51km)နဲ႔ အျမန္ႏႈန္း Mach4ရွိတဲ့ Evolved Sea Sparrow မွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ တာလတ္ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ၎ဟာလည္းRolling Airframe ဒုံးက်ည္ကဲ့သို႔ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ရွာေဖြေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳကာ ပစ္မွတ္ကိုလမ္းညႊန္ျပေပးတဲ့ အလင္းေရာင္ေရဒါနဲ႔ ထပ္တူညီပါတယ္၊
ထိုင္းေရတပ္ဟာ Sea Sparrowကို တည္ေဆာက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာႏွင့္အမၽွ Chakri Naruebet ဟာလည္း ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ၿပီး ရွင္သန္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ထိုင္းေရတပ္ရဲ့ အထင္ကရျဖစ္တဲ့ Chakri Naruebet ရဲ့ အဓိက က႑ဟာဆိုရင္ ထိုင္းနိုင္ငံ စီးပြားေရးဇုန္အား ေစာင့္ၾကည့္ရွာေဖြရန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ ၊ ေလေၾကာင္းအေထာက္အပံ့အား ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္၊
ထိုကဲ့သို႔ လက္နက္ ကန႔္သတ္မႈမ်ားနဲ႔ Chakri Naruebet ဟာ ေဟာင္းႏြမ္းလာတဲ့ Harriersဂ်က္ေလယာဥ္ေၾကာင့္ အျခားေသာေလယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရန္သူေလယာဥ္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသစ္ေတြေရြးခ်ယ္နိုင္ေစဖို႔အက်ိဳးအျမတ္ရေစပါတယ္၊
Harriers တမ်ိဳးထဲသာရွိတဲ့ ပင္လယ္ေအာ္တြင္ တျခား ရန္သူ႔သေဘၤာမ်ားေလယာဥ္မ်ား ထိန္းထားနိုင္စြမ္းမရွိတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္လစ္ဟင္းေနတဲ့ Chakri Naruebet ဟာ အႏၲာရယ္ကိုထိုင္ေစာင့္ေနတဲ့ ဘဲတေကာင္နဲ႔တူပါတယ္၊ Chakri Naruebet ကိုပင္လယ္ထဲေစလႊတ္ခဲပီး ပို႔တဲ့အခါမွလဲာ ထိုင္းေတာ္ဝင္မိသားစုကို ေခၚေဆာင္သြားေလ့ရွိၿပီး ကမၻာအႏွံ့က ကာကြယ္ေရး ေလ့လာသူေတြဟာ တည္ေဆာက္သမၽွထဲမွာ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ေတာ္၀င္ရြက္ေလွလို႔ သက္မွတ္ပါတယ္၊
ဒါ့ေၾကာင့္ ထိုင္းေရတပ္က တဂယ္ပဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကိုလိုအပ္တာလား?ဒါမွမဟုတ္ Chakri Naruebet ဟာ ေတာ္ဝင္မိသားစုအတြက္သာ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္တဲ့ အထင္ကရ သေဘၤာ တစ္စင္းျဖစ္ေနတာလား?
Previous Article တက္ကသိုလ်၏ပါမောက္ခဆရာမတစ်ဦးအဖြစ်မှ ချောမောလှပသောရုပ်ရည်ကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ မော်ဒယ်မလေးတစ်ဦးအဖြစ် ကူးပြောင်းလာခဲ့သည့် ကောင်မလေး
Next Article ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းရောက်ရန်ခက်ခဲသောဒေသများသို့ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးမည့် မောင်းသူမဲ့ UAVs များ